Ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny Fianarana VIETNAMESE faha-6 - Fizarana 2 - Ny Tany Masina Fandinihana any Vietnam
… Notohizan'ny fizarana 1 - manavao…
Lohahevitra ifantohana amin'ny kaonferansa
Topics mifantoka amin'ny fihaonambe ambanin'ny 10 Panels dia ireto manaraka ireto:
Olana isam-paritra sy iraisam-pirenena
Momba ny toe-javatra isam-paritra sy iraisam-pirenena
+ Filaminana sy filaminana eto amin'izao tontolo izao, Azia Atsinanana ary ny Faritra Indo-Pacific: ny toe-java-misy sy ny fomba fijery;
+ Fifaninanana fahefana matanjaka, indrindra ny Etazonia - Fifaninanana stratejika any Shina: ny toerana misy azy, ny fomba fijery ary ny fiantraikany Viet Nam, ny faritra sy izao tontolo izao;
+ Fanamby momba ny fiarovana nentim-paharazana sy tsy nentin-drazana ho an'ny faritra sy izao tontolo izao;
+ Fitondrana isam-paritra sy manerantany, ny andraikitry ny maritrano rezionaly sy iraisam-pirenena amin'ny sehatra vaovao.
Mikasika ny fifandraisan'i Vietnam any ivelany
+ Tetikady sy politikam-bahoaka avy any Vietnam: Zava-bita, fotoana mety, fanamby ary vahaolana;
+ Viet Nam ary ny ASEAN;
+ Fifandraisan'i Viet Nam miaraka amin'ny hery lehibe (ie Etazonia, Sina, India, Japon, sns.);
+ Ny faritra lalina kokoa sy malalaka kokoa any Vietnam ary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena;
+ Viet Nam ary ny andraikiny amin'ny fitantanana faritra sy manerantany.
Status quo amin'ny fanadihadiana iraisam-pirenena ataon'ny manam-pahaizana vietnamiana sy ny fikarohana momba ny fifandraisan'ny vazaha avy any ivelany miaraka amin'ny manam-pahaizana vahiny.
Ny Vietnamianina dia nieritreritra hatramin'ny fomba nentim-paharazana ka hatramin'ny ankehitriny
+ Votoatiny, natiora ary toetran'ny nentim-paharazana vietnamiana nieritreritra;
+ Fifandraisana eo vietnamiana firehan-kevitra ary fivavahana eo amin'ny tantara;
+ Ny fitaoman'ireo firehan-kevitra sy fivavahana nentim-paharazana Kolontsaina Vietnam ary olona anio;
+ Fironana eritreritra eto amin'izao tontolo izao sy ny fitaoman'izy ireo i Vietnam;
+ Olana mifandraika amin'ny fikarohana an'ny Eritreritra vietnamiana eo amin'izao tontolo izao ankehitriny.
Politika Vietnamianina avy any Doimoi hatramin'izao
+ Fampiharana ny Marxisme- Leninisme in Viet Nam nandritra ny Doi moi dingana;
+ Fifandraisana lehibe ao Doka Doimoi;
+ Olana momba ny antokon'ny fitondrana ao i Vietnam;
+ Anjara asan'ny sosialista State of the people, ataon'ny olona sy ny vahoaka;
+ Olana mifandraika amin'ny fitantanana ara-tsosialy, ny rariny ara-tsosialy, ny fandrosoana ara-tsosialy, ny marimaritra iraisana ary ny firaisankina eo amin'ny fiaraha-monina.
Fianarana etnik sy fivavahana
+ Ny olana ara-poko amin'ny fampandrosoana maharitra ireo foko sy ny fampiharana ny firaisam-pirenena lehibe;
+ Fanatanterahana ny politika ara-poko sy ny fampandrosoana maharitra ny foko;
+ Andraikitry ny foko any amin'ny firenena sy ny fiarahamonina any ampitan-dranomasina vietnamiana amin'ny dingan'ny fananganana ny Vondrom-pirenena Vietnamese;
+ Ny soatoavina kolontsaina an'ny foko sy ny fananganana kolontsaina nasionaly mitambatra Viet Nam amin'ny fahasamihafana misy ankehitriny;
+ Fanovana ny asa fivelomana, fiaraha-monina, kolontsaina, tontolo iainana sns ary fampandrosoana maharitra ireo foko ankehitriny;
+ Olana vaovao amin'ireo vondrom-pirazanana ara-pinoana ankehitriny Viet Nam.
+ Fivavahana sy fanovana ara-pinoana ao Viet Nam amin'ny sehatra vaovao;
+ Fifandraisana eo amin'ny sehatry ny fivavahana sy ny tsy finoana (ny toekarena, sosialy, kolontsaina, ara-dalàna, fanabeazana ary tontolo iainana) amin'ny vanim-potoana ankehitriny Viet Nam;
+ Vondrom-pinoana vaovao mipoitra, fivavahana mipoitra tampoka ao Viet Nam anio;
+ Fifohazana an'i Fivavaham-bahoaka sy ny fironana vao misondrotra;
+ Fifandraisam-pinoana amin'ny Viet Nam eo amin'ny tantara sy amin'izao fotoana izao.
Fanabeazana, fanofanana ary fampandrosoana ny olombelona any Vietnam
+ Andrimpanjakana sy politika hampiroborobo ny fanabeazana sy ny fiofanana amin'ny Viet Nam eo amin'ny lafiny toekarena eo amin'ny tsena sy ny fampiraisana iraisam-pirenena, mandray ny kalitao sy ny fahombiazan'ny vokatra tahaka izao;
+ Ny fanabeazana sy ny fiofanana miaraka amin'ny siansa sy ny haitao no tena manosika ny fampandrosoana ara-tsosialy sy toekarena;
+ Fahombiazana sy fahombiazan'ny fitantanana ny fanjakana, fitantanana matihanina sy fitantanana amin'ny fanabeazana sy ny fiofanana manoloana ny fizakan-tena fizakan-tena mifandraika amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny andrim-panabeazana sy fiofanana;
+ Paikady ho an'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena sy ny fampidirana amin'ny fanabeazana sy ny fiofanana ka Viet Nam ho lasa firenena matanjaka amin'ny fanabeazana sy ny fiofanana ao amin'ny faritra, hahatratra ny haavo mandroso an'izao tontolo izao, handray anjara amin'ny tsena iraisam-pirenena ho an'ny fampiofanana momba ny olombelona;
+ Fanabeazana sy fiofanana mikendry ny fanaitaitra ny lovantsofin'ny fitiavan-tanindrazana, ny reharehan'ny firenena, ny finoana ary ny hetahetan'ny fanambinana sy fahasambarana fampandrosoana an'i Vietnam Nam;
+ Fampianarana sy fanofanana mba hampahafantatra, hanaja ary hankato ny lalàna, hiaro ny tontolo iainana, hitahiry ny maha-kolontsaina ny maha-izy azy Vahoaka Vietnamese, indrindra ny taranaka tanora;
+ Fampivoarana maha-olona feno an'i Vietnam Nam lasa ivon'ny paikady fampandrosoana ara-tsosialy sy toekarena;
+ Mandroso Vahoaka Vietnamese amin'ny ankapobeny, hanana fahasalamana, fahaiza-manao, mari-pahaizana, fahatsiarovan-tena ary andraikitra lehibe amin'ny tenany, ny fianakaviany, ny fiarahamoniny ary ny firenena;
+ Mampivelatra talenta, faharanitan-tsaina ary kalitaon'ny Vahoaka Vietnamese no ivon-toerana, tanjona ary hery manosika ny devlopment nasionaly;
+ Fanondroana momba ny fampandrosoana ny olombelona (HDI) sy ireo olana ao aminy Viet Nam anio;
+ Ny rafitry ny soatoavim-pirenena, ny rafitra soatoavina ara-kolotsaina ary ny fenitry ny olombelona no fototry ny fampandrosoana ny fanabeazana sy ny fiofanana ary ny fampandrosoana ny olombelona ao Viet Nam;
+ Hatsarao ny halavan'ny Vahoaka Vietnamese amin'ny alàlan'ny fanabeazana amin'ny fahalalana, etika, hatsarana, fahaiza-miaina ary fanabeazana ara-batana;
+ Politika miavaka hisarika sy hankasitrahana ireo talenta sy manam-pahaizana na eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena.
Toekarena, Teknolojia ary tontolo iainana
+ Fampidirana sy fanavaozana ny toekarenaDoimoi) ao Viet Nam;
+ Fivoarana ara-toekarena stratejika amin'ny tontolon'ny fampandrosoana vaovao;
+ Fanatsarana ny fifaninanana an'ny Orinasa Vietnamianina amin'ny dingan'ny fampidirana sy fifaninanana manerantany;
+ Famerenana amin'ny laoniny ny toe-karena sy fanavaozana ny lamina fitomboana;
+ Fanovana ara-toekarena nomerika sy fitomboana tafiditra ao Viet Nam;
+ Manararaotra Industry 4.0 fotoana ahafahana manatsara ny andraikitry ny siansa, ny teknolojia ary ny fanavaozana ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy toekarena;
+ Manankarena sy mamita ny andrimpanjakana ekonomika mifantoka amin'ny sosialista;
+ Fampandrosoana an-tanàn-dehibe, fampandrosoana ara-toekarena isam-paritra, ary fampandrosoana vaovao any ambanivohitra;
+ Viet Nam ary fifanarahana varotra maimaimpoana ho an'ny taranaka vaovao (EVFTA, CPTPP);
+ Fampandrosoana ara-toekarena mifandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny valin'ny fiovan'ny toetr'andro Viet Nam;
+ Mamaly ny Valan'aretina Covid-19, mahatsapa fa “tanjona roa”Hiadiana amin'ny areti-mandringana sy fampiroboroboana ny toekarena amin'ny sehatra ara-dalàna vaovao;
+ Mampivelatra ny toekarena an-dranomasina maharitra any Viet Nam;
+ Fitantanana mahomby sy fampiasana loharanon-karena voajanahary, fiarovana ny tontolo iainana ary valin'ny fiovan'ny toetrandro;
+ Fampiharana an'i Vietnam Nam ny Tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra (SDGs) ambanin'ny UN 2030 Agenda ho an'ny fampandrosoana maharitra.
+ Fampiharana teôriazy momba ny fiteny vaovao manerantany amin'ny fandalinana ny Fiteny vietnamiana sy ny fiteny foko vitsy an'isa;
+ Ny Fiteny vietnamiana eo ambanin'ny fiantraikan'ny indostrialy, fanavaozana, fanaovana tanàn-dehibe, fifindra-monina ary fampiraisana iraisam-pirenena;
+ Fifandraisana eo amin'ny fiteny sy ny kolontsaina, fandinihana ireo toetra ara-kolontsaina - fisainana nasionaly aseho amin'ny fiteny;
+ Mitahiry ny fahadiovana sy ny fampandrosoana ny Fiteny vietnamiana miaraka amin'ny fanarahana fenitra ny vietnamiana eo amin'ny sehatry ny fampiraisana iraisam-pirenena sy ny 4.0 revolisiona;
+ Mitahiry sy mampiroborobo ny andraikitra sy ny mombamomba ireo fiteny foko vitsy an'isa mba hitondra anjara birikiny amin'ny fampandrosoana maharitra ny firenena amin'ny sehatra vaovao;
+ Fiteny linguistics, fampianarana fiteny any an-tsekoly, fampianarana vietnamiana amin'ny maha-teny vahiny, sns. eo amin'ny sehatry ny fampiraisana iraisam-pirenena.
+ Fanomezana Literatiora vietnamiana (avy amin'ny literatiora an'ny olona ka hatramin'ny literatiora ankehitriny; haisoratra Vietnamianina any an-toerana sy haisoratra an-trano) amin'ny dingan'ny fanavaozana nasionaly sy fanavaozana ny toetr'andro;
Haisoratra literatiora vitsy an'isa: fizotran'ny fampandrosoana, mpanoratra, fironana malaza; ny firenena - fifandraisana ara-poko; ny mombamomba ny kolontsaina, ny fifandraisana ara-kolontsaina sy ny literatiora, sns.
+ Fampidirana iraisam-pirenena sy ny mombamomba ny firenena ao Literatiora vietnamiana (ny fiantraikan'ny fanatontoloana amin'ny literatiora; fifanakalozana kolontsaina sy literatiora; olana momba ny fananganana ny toetra amam-panahy mitondra ny maha-Vietnamianina, sns.);
+ Haisoratra nadika: fizotran'ny fampandrosoana; tsena fandikana literatiora, fifanakalozana literatiora ary fampiroboroboana; fampiharana sy politika; Sns
+ Fampiharana ireo teôria sy fomba maoderina amin'ny Haisoratra Vietnamianina fikarohana (ny fitaoman'ny modernisme sy postmodernism);
+ Fampianarana literatiora ao amin'ny indostria 4.0 vanim-potoana.
Fanjakana sy lalàna
+ Fananganana ny lalàna mifehy ny sosialista Fanjakan'i Viet Nam; Ny fandaminana, ny fampiharana ary ny fifehezana ny fahefam-panjakana; Ny anjara asa sy ny asan'ny lalàna mifehy ny lalàna Fanjakan'i Viet Nam; Ny maha-iraisana sy ny mampiavaka ny lalàna mifehy ny lalàna Fanjakan'i Viet Nam;
+ Fitondram-panjakana ao Viet Nam manoloana ny fepetra takiana amin'ny fampidirana iraisam-pirenena sy ny fampandrosoana maharitra;
+ Fifandraisan'ny olom-pirenena sy ny fandraisana anjaran'ny besinimaro amin'ny Raharaham-panjakana in Viet Nam;
+ Fitantanana ara-tsosialy amin'ny toe-javatra voajanahary sy sosialy tsy mahazatra ao Viet Nam;
+ Lalàna momba ny fampiraisana iraisam-pirenena sy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fampiraisana iraisam-pirenena;
+ Ny andraikitr'i Viet Nam amin'ny famolavolana sy fanatanterahana ny fanoloran-tena iraisam-pirenena;
+ Famaritana ara-dalàna sy ny fifindra-monin'ny lalàna vahiny any Viet Nam;
+ Lalàna momba ny fampiroboroboana ny fitomboana maintso sy ny fampandrosoana maharitra;
+ Fiaraha-miasa iraisam-pirenena amin'ny fisorohana ny heloka bevava;
+ Ny lalàna sivily, fianakaviana ary fanambadiana, lalàna momba ny fomba sivily ao Viet Nam;
+ Lalàna mifehy ny heloka bevava sy ny heloka bevava ao Viet Nam;
+ Lalàna momba ny fampiasam-bola, ny orinasa ary ny varotra Viet Nam eo amin'ny sehatry ny fampidirana iraisam-pirenena sy ny fampandrosoana maharitra;
+ Lalàna momba ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny valin'ny fiovan'ny toetrandro ao Viet Nam;
+ Lalàna mifehy ny asa sy fiantohana ara-tsosialy ao Viet Nam eo amin'ny sehatry ny fampidirana iraisam-pirenena sy ny fampandrosoana maharitra;
+ Fiatraikany ara-dalàna an'ny Revolisiona indostrialy fahaefatra.
Tantara, Sino- Nom, Arkeolojia
+ Ny olana ara-tantara an'i Vietnam Nam hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny mialoha Doimoi eo amin'ny sehatry ny politika, miaramila, toekarena, diplomasia, kolontsaina ary fiaraha-monina;
+ Ny olana ara-tantara an'i Vietnam Nam avy amin'ny Doimoi manolotra.
+ Fivoarana vaovao amin'ny Fianarana Sino-Nom;
+ Fanararaotana any ivelany Arsiva Sino-Nom, Antontan-taratasy Sino-Nom miaraka amin'ny maha-olona nomerika;
+ Fitaovana Sino-Nom ary ny fandalinana ny Azia Atsinanana lahatsoratra kilasika;
+ Sino-Nom ao amin'ny Kolontsaina ankehitriny vietnamiana ary ny fandraisan'anjaran'ny Sino-Nom lehibe amin'ny fandinihana ny Tantaran'ny Vietnamianina ary kolontsaina.
+ Fikarohana arkeolojika vaovao ao Viet Nam.
+ Olana teôria ankapobeny momba ny Kolontsaina Vietnam eo amin'ny sehatry ny fampidirana sy ny fampandrosoana: politika ara-kolontsaina, teôria, fomba fiasa, fomba fiasa amin'ny fikarohana ara-kolontsaina eo amin'ny sehatry ny fampidirana sy ny fampandrosoana iraisam-pirenena ankehitriny;
+ Kolontsaina ara-tsosialy, isam-paritra ary ara-poko ankehitriny: fampiharana ny kolotsaina ao amin'ny fianakaviana, ny firazanana, ny fiarahamonina, ny fety, ny finoana, ny zava-kanto, ny fahalalana sns.
+ Famerenana ny kolontsaina, fanovana ary fanovana ao Viet Nam manoloana ny fanovana mavitrika ateraky ny fizotran'ny fampidirana sy ny fampandrosoana;
+ Ny andraikitry ny kolotsaina amin'ny fampidirana sy fampandrosoana maharitra: Ahoana no nilalao ny kolontsaina ho loharano manan-danja endogenous amin'ny fampidirana sy ny fizotran'ny fampandrosoana maharitra;
+ Indostrian'ny kolontsaina sy famoronana ao Viet Nam;
+ Fampiharana ny lova ara-kolotsaina, fitehirizana ary fampiroboroboana ny lova ara-kolontsaina eo amin'ny sehatry ny fampidirana sy ny fampandrosoana ao Viet Nam ankehitriny, ny fifandraisana misy eo amin'ny fitehirizana ny lova sy ny fampandrosoana, eo amin'ny soratra lova sy ny fanamby hiarovana sy hampiroborobo ny lova, sns.
+ Rafitra ara-tsosialin'i Viet Nam ary ny stratification amin'ny tetezamita sosialy-toekarena: fananganana kilasy sosialy; fivezivezena ara-tsosialy; tsy fitoviana sy fahasamihafana eo amin'ny fiaraha-monina;
+ Fifindra-monina sy fanaovana tanàn-dehibe: endrika fifindra-monina; ny fari-piainana sy ny kalitao, ny fifandraisana ara-tsosialy, ny fandraisana anjaran'ny mpifindra monina; ankizy ao amin'ny fianakaviana mpifindra monina; ny tanàn-dehibe sy ny faritra ambanivohitra;
+ Fampandrosoana ambanivohitra: fanovana asa fivelomana, fanovana kolontsaina amin'ny fomba fiainana any ambanivohitra, fanovana ny fampiasana tany, fananganana ambanivohitra vaovao;
+ Mponina sy fampandrosoana maharitra: Manova ny firafitry ny isam-ponina, ny tahan'ny fahavokarana; firaisana ara-nofo isaky ny teraka; fampifanarahana amin'ny fahanteran'ny mponina; politikam-bahoaka amin'ny vanim-potoana fampidirana;
+ Fianakaviana sy Miralenta amin'ny tetezamita: fanambadiana sy fisaraham-panambadiana eo amin'ny fiaraha-monina maoderina; fiovan'ny fifandraisan'ny mpianakavy, ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ny fahasamihafan'ny karazana fianakaviana vaovao; fianakaviana foko vitsy an'isa; anjara asan'ny fianakaviana;
+ Fiarovana ara-tsosialy sy asa sosialy: fahantrana any ambanivohitra, an-tanàn-dehibe, foko vitsy an'isa; lohahevitra momba ny fifanampiana; fidirana amin'ny asam-panjakana; asa sy asa fivelomana ho an'ny vondrona sahirana; modely fiarovana ara-tsosialy; fanofanana sy fampiharana asa sosialy;
+ Fitantanana ara-tsosialy amin'ny dingan'ny fampandrosoana sy fampidirana: maodely fitantanana, fomba, fitaovana ary refy ara-tsosialy mifandraika amin'izany; fitokisana ara-tsosialy;
+ Fikarakarana ara-pahasalamana: fikarakarana ara-pahasalamana ara-pananahana, fahasalamana ara-tsaina, herisetra an-tokantrano, fidirana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana sy fiarovana ara-tsakafo;
+ Olana ara-tsosialy amin'ny fanovana nomerika: Fiantraikan'ny fiovan'ny dizitaly ary 4.0 Revolisiona indostrialy; fanovana nomerika eo amin'ny sehatry ny asa, asa, fanabeazana ary fitsaboana ara-pahasalamana; Olana teorika sy azo ampiharina amin'ny fiarahamonina dizitaly.
◊ Ny Fihaonambe Iraisam-pirenena faha-6 momba ny FIANARANA VIETNAMESE - Fizarana 1.
(Visited 602 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny Fihaonambe Iraisam-pirenena faha-6 momba ny FIANARANA VIETNAMESE - Fizarana 1
Viet Nam, Sivilizasiona sy Kolontsaina – NY MPANATRA →